Hoyga Barashada Tawxiidka - (8)- Dagaal Diin ma noqon karaa?
(8)- Dagaal Diin ma noqon karaa?
1)- Adduunka laba dacwo (دعوة), baa ka jirta sida uu Allaah inoo sheegay:
-" وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ" (البقرة:221)
-" وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" (يونس:25)
-" أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (المجادلة:22)
-" إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ" (فاطر:6)
-" أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ" (المجادلة:19)
Xizbiga khayrka wada hadduu aamuso, kan sharka wada baan aamusayn, hadduu dagaalka gacnaha ka laabto, kan kalaan joogsaneyn, inuu baabi'iyana isku deyeya. Waayo waa laba xizbi oo aan nabad ku wada noolaan karin waqti badan.
-" وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ" (البقرة:251)
"Marka jihaadka kufaartu waa Diin xaq ah, waxaana rumaysnaa nabi Muusa iyo Ciisa iyo Muxammad, iyo nabiyadii ka horreeyey oo dhan, nabadgelyo iyo naxariisi haw ahaatee. Inkastoo ay ku kala duwanaayeen, fursadaha iyo awoodaha ay u heleen gudashada waajibkaas".
2)- waayadii hore caammada waxaa lagu siri jirey, in sanamyo loo qoro, ama qabriyo loo qurxiyo, ka dibna la yiraahdo, wax u bixiya, si aad khayr ugu heshaan, ama shar uga nabad gashaan.
Waddanka, calanka, qaranka, dastuurka, wax soo saarka, ra'yul caamka, beesha caalamka, iyo xuquuqul- insaanku, waa wada sanamyo casri ah, oo tay rabaan laga hormarinayo tuu Allaah rabey.
Mabda'a ama sanamka ay u bixiyeen,"xuquuqul- insaanka", waxay uga gaashaamanayaan oo keliya jihaadka islaamka, kuna daminayaan shucuurka caqiidadu wadato.
Wixii ka danbeeyey kacaankii Faransiiska,waxay si bareer ah u caddaysteen, inay ka tanaazuleen, ilaah tala laga sugayo, waxayna ku beddesheen, dadku isagaa aayihiisa ka talinaya, aqoontiisa iyo waaya aragnimadiisa keliyaana ku filan.
Markay yiraahdeen: "ilaah talo laga sugi mayo", miyay malaa'ik noqdeen oo xuquuqul-insaanka garteen!!?.
Sow iyaga ma ahayn wixii baabi'iyey khalqiga, oo gumaadkii Hiroshima dhigay.
Sow maanta dawlad walboo amar ka maqli weyda, kuma xukumaan xasuuq iyo baabi'in!!?.
Mabda'a "xuquuqul- insaanku", wuxuu shaqeeyaa inta la addeecsan yahay, waa sanam ay caamada ku sii jeedinayaan, si aan loogu fakarin jihaad iyaga dhan ka ah, oo Allaah lagu raalli gelinayo. Haddiise la addeeci waayo "xuquuqul- insaan" ma jirayo, ee waxaa jiraya gumaad aan naxariis lahayn.
Rabbiga Caalamkaba iska leh, wixii amar ka maqli waaya, hadduu dilkooda banneeyo, waxay oranayaan "xuquuqul- insaankii" baa meel looga dhacay.
Iyagoo addoomo ahna wixii amar ka maqli waaya, waxay oranayaan waa la xasuuqi karaa, "xuquuqul- insaanna" laguma tuman, maatada baaba'aysana danbigeedu wuxuu saaran yahay, ninka amarka naga qaadan waayey, mana saarra ninka wax xasuuqay !!!.